* Light Of Myanmar *: တုံးလွန်း အလွန်းသော ဒီမိုငတုံးများသို့
မြန်မာစစ်တပ်သည် နှစ် ၄၀ ကျော် လက်နက်ကိုင် ဆန့်ကျင်မှုများ ၊၈၈ အေ၇းအခင်း၊ စက်တင်ဘာ အရေးအခင်းနဲ့ နာဂစ် ကိစ္စများတွင် အောင်ပန်းဆင်ခဲ့လေသည်။ သင်တို့သည် LOOSER များ ဖြစ်နေပြီ။ နှစ်ပေါင်း ၄၀ ကျော်အထိ အချိန်ကုန်စေခဲ့ပေသည်။ ဒီမိုကရေစီ တစ်ပြား တစ်ချပ်လေးတောင် ရအောင် မယူနိုင်ပါ။ ထိုမျှ ညံ့ဖျင်းသော သူများဖြစ်ပေသည်။ ယခုအချိန်တွင်လည်း 2010 ရွေးကောက်ပွဲကို ဆန့်ကျင်၊ ရှုံ့ချလုပ်နေပေသည်။ 2010 ကို ဆန့်ကျင်ခဲ့သည် ရှိသော် ရွေးကောက်ပွဲပျက်သွားတဲ့ နောက်ဘယ်လို ပိုမိုကောင်းမွန်လာမယ်လို့ မျှော်လင့်နေလို့လဲ? 2010 ရွေးကောက်ပွဲ မဖြစ်မြောက်လို့ နအဖက စားပွဲဝိုင်းကို လာမယ်ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးတော့ မတွေးလေနှင့်။ နအဖသည် လက်ရှိ 100% ရထားသည့် အနေအထားမှ လျှော့စရာ မလိုခဲ့ပါလျှင် ဘယ်သူက အမှန်တကယ် စိတ်ချမ်းသာမည်နည်း? ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နအဖလုပ်သမျှ ဆန့်ကျင်ရရင် ကျေနပ်တယ်ဆိုရင်တော့ ခင်ဗျားတို့ ဒီမိုငတုံးတွေ Homer ခိုင်းတဲ့အတိုင်းပဲ လုပ်ကျပါတော့ . . . . . !
Posted by * In Search of Truth * at 1:05 AM
myo swe said...
မောင် မိုးသီး လဲ ပေါ ချောင် ချောင် ဖြစ် နေ ပြီ
က မင်းမေကြီးကန်american က ကွဲ့
မင်းဖေကြီး ဘင် ဂါလီ bangladesh က မ ဟုတ် ဖူး
ဗမာပြည် က တရား မ ၀င် ကုလားတွေ ကို အကုန် ပြန်ပို့ လိုက် လို့ မင်းတို့ မိ သားစု လေး ဖောက် သည် ပျောက် နေ ပါ အုံး မယ်
မောင် ဆန်နှင့် ဇော်မျိုးတို့ ရဲ နောက်ဆောင်းပါ တပုပ်ကို
လည်း ဒီမှာလာရောက် ဖတ်ကြည့် စေချင်ပါတယ်..
အော် ..လည်မလိုလိုနဲ့ အ တယ်ဆိုတာ ငါညီတို့ပါလား
တစ်ပါးကို ပတ်ခက်တာတို့ ဘာတို့ဆိုတာ အောက်ကျတယ်။ကိုဟာကို နေကြပါကွာ..ဘယ်သူ
အမှန်ဆိုတာ ဘယ်သူလိမ်တယ်ဆိုတာ သိကြမှာပါ။
Pho La Nat Thar said...
Both of your posts are so childish. Pls try to improve. All the reader are not stupid like you.
တိုင်းချစ်ပြည်ချစ်စိတ် ဆိုတာ၊ တကယ်တမ်းလက်တွေ့၊ တိုင်းပြည်ရဲ့ ကောင်းကျိုးကိုပြု၊ ဆိုးကျိုးများ ကိုဖယ်ရှားဖို့ ဘဲဖြစ်တယ်။ နိုင်ငံသား အချင်းချင်းက ပုတ်ခတ်၊ တိုက်ခိုက်နေဖို့ မဟုတ်ပါဘူး၊ နောက်ပြီး နိုင်ငံကို တကယ်တမ်းချစ်တယ် လို့ပြောရင် လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ပါ၊ အချင်းချင်း တိုးတက်အောင် ကူညီပါ၊ လှေကားပေါ်တက်နေသူကို ပြုတ်မကျအောင် ထိန်းပေးပါ၊ ဆွဲမချကြနဲ့ပေ့ါ၊ ဒါမှ တိုင်းချစ်၊ ပြည်ချစ်၊ မျိုးချစ်စိတ်မှန် ဖြစ်မှာပေါ့။
ဟေ့ကောင်တွေ မောင်ဆန်နဲ့ဇော်မျိုး မှန်ရှေ့မှာကိုယ်တုံးလုံးချွတ်ပီး မိုးဖင်မိုးလင်းကြကွာ
မင်္ဂလာ Gregorian နဲ့ ကရင်နှစ်သစ်ပါဗျာ၊ အားလုံးပဲ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာချမ်းသာ စေဖို့ ဆန္ဒပြုပါတယ်။ :-)
နအဖက လက်သပ်မွေးထားတဲ့ တပည့်ကျော်ရဲ့ဘလော့ပါ၊
ကလေးငယ်များကို အဆိပ်ခတ်သတ်ခြင်း နှင့် ဒီမိုမီဒီယာ